GỌỌMENTI ETITI EWEGHACHILA ỌMỤMỤ AKỤKỌ MGBE OCHIE N’ỤLỌ AKWỤKWỌ – hoo!haa!!
Minista ukwu ala anyị agụmakwụkwọ dị n’aka, bụ Mallam Adamu Adamu, ekwuola na Gpọmentị Ala anyị eweghachila ọmụmụ ihe gbasara Akụkọ Mgbe Ochie bekee kpọrọ History n’ụlọ akwụkwọ Sekọndịrị ala anyị. Ọ sịrị na nkea ga-eme ka ụmụ akwụkwọ anyị mata ihe megasịrị n’ala anyị n’oge gboo.
Anyị ga-aghọta na nwa mgbe nta gara aga, ewere ọmụmụ akụkọ mgbe ochie gbakwunye n’okpuru ihe ọmụmụ gbasara mmekọrita mmadụ n’ibe ya bekee kpọrọ Social Studies. Nkea wetara nrụrịta ụka n’etiti ndi ala anyị
Adamu kwuru na uru ọmụmụ akụkọ mgbe ochie bara na ikwalite mmepo obodo, ịkọwa ebe mmadụ si nakwa ihe ndi ọzọ abụghị ihe aga akọ sọ n’akụkọ. Okwukwara na otu n’ime ebum n’obi gọmenti na-achị ala anyị ugbua bụ ịhụ na ndi mmadụ gbanworo ajọ akparama agwa ha na-akpa. Okwuru na ịma maka akụkọ mgbe ochie ga-enye aka ime nkea.
Adam kwuru na usoro ọgbarụ ọhụrụ eweputara maka iji na-agụ akụkọ mgbe ochiea ga-eme ka ụmụ akwụkwọ mụta ọtụtụ ihe ga-eme ka ha hụta akụkọ mgbe ochie dika ihe kwesiri ọmụmụ. Ọ siri na nkea ga-enye aka ikwalite ọdi mma ala anyị ugbua nakwa ọdị n’ihu.
Adam gara n’ihu kwue na ọmụmụ akụkọ mgbe ochie ga-eme ka ụmụ Naijiriya na-eto eto mara ihe mere n’oge gboo, gbakwunyere ya nke ne-eme kita ma nọrọ ya chebiri maka ọdị n’ ihu.
N’okwu nke ya, osote ministaa bụ Prọfesọ Anthonu Ọnwuka sịrị na obodo ọbụla na amaghị maka akụkọ mgbe ochie ha anaghị aga n’ihu, maka na ha agaghị ama ka ha ga-esi ghọta ihe na-eme kita ma cheere ya aka mgba. N’ụdị ime ka ala anyị gaa n’ihu, mekwanụ ka akwalite ọdị mma ndi mmadụ, ọka mmụtaa sịrị na ọdị ezigbo mkpa iwechita ọmụmụ akụkọ mgbe ochie na ụlọ akwụkwọ anyị ha.
Previous Post: NDI NCHE EHI AMALITEKWALA IBU AGHA NA STEETI BENUE
Next Post: ANYỊ AMAGHỊ KA ỤGWỌ ỌNWA NDI ỌRỤ OMEBE IWU SI RỊA ELU ỌJỊ – RMAFC